DJ Zinhle opts out of Harare show - DailyNews Live
DJ Zinhle opts out of Harare show
ENTERTAINMENT WRITER • 20 June 2014 10:08AM • 1 comment
HARARE - South African musician DJ Zinhle has pulled out of next month’s official opening concert of Radost Platinum Club which is based at Longcheng Plaza near the National Sports Stadium.
The popular musician was set to share the stage with music superstar Oliver Mtukudzi to mark the launch of the new upmarket night club on July 3.
Wanisai Tendai Mutandwa, the marketing and publicist manager of the new entertainment joint told the Daily News yesterday that DJ Zinhle, whose real name is Ntombezinhle Jiyane, had opted out of Radost official opening because of commitments in South Africa.
“DJ Zinhle is no longer coming to Zimbabwe for the official opening of the joint because she is expected to perform in South Africa on July 5 at July Weekend Durban,” said Mutandwa who is popularly known in showbiz circles as Mahwindo.
Mutandwa said dendera music star Suluman Chimbetu had been roped in to replace the widely-travelled South African entertainer who was the first female DJ across the Limpopo to release a house compilation album.
“The official opening show of Radost is still on. We have roped in Sulu to perform on the day and we are very confident that the event will lose none of its lustre because Sulu is a proven entertainer with a huge following,” she said
The Radost spokesperson claimed that the Long Chen Plaza entertainment venue would uplift the face of entertainment in the Zimbabwean capital city.